Happy Birthday Linlet..
But I would like to advise you is not to wear like this infront of Buddha and the monks. This is not our relegious behaviour . Because you should be the “SAN PYA ” of our younger generation who live in foreign countries. Whising you for the more and more brighter future ..More and more “Lin Let”
Comment by Rose Swe December 17, 2007 @ 12:54 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် rose swe ရေ ။ ကျွန်မ အဲဒီနေ့က ၀တ်ထားတာက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး ။ လက်ကလေးပြတ်တာပဲရှိတာပါ။ ဟိုက်ဟိုက်တွေ ခါးထွက်နေတာတွေ ရင်ဘတ်အရှေ့ဘက်ပိုင်းကတော့ လုံးဝလုံလုံခြုံခြုံ အပြည့်ါပပဲ ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ အ၀ါဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ အ၀ါဝတ်လိုက်တာပါ Thanks 🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN December 17, 2007 @ 3:48 am
Simple birthday wishes for you:
Comment by Karaweik ကရ၀ိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha) December 18, 2007 @ 3:36 pm
ညီမလေး မွေးနေ့ မှ အစပြုရ်ျ အခက်ခဲများ ကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် ကို မတောင့်မတ မကြောင့်မကျရပါစေ
Comment by ဂျေဂျေ December 24, 2007 @ 8:50 pm